Tag: twitter kubira | Martech Zone
Tag: twitter kubira
Kupomera Bhangi, Kwete Gororo
Chipiri, January 6, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iko kune kurwiswa kwemablog nemasaiti achifanotaura kupera kweTwitter mushure mekunge mamwe maakaunzi anoonekwa abiwa. Mamwe emasaiti aya anotaura nezveiye anobiridzira nekutya uye neTwitter nekuzvidza (denda ?!). Chii chiri munyika chakashata nevanhu? Chokwadi chinotaurirwa, ini ndakawana mamwe mameseji akasiiwa nemubati achiita zvinosetsa. Izvi hazvireve kuti ini handibate mutengesi kuzvidavirira, zvakadaro. Akaita sarudzo ku
Tuesday, January 6, 2009 Sunday, October 4, 2015